ESAT Afaan Oromo - Page 33 of 54 - ESAT Afaan Oromo
Filannoo Pirizedantummaa biyya Somaaliyaa Mohaammad Abdullaahii Faarmaajoo injifatan.
Filannoo pireezdaantummaa Biyyaa Somaaliyaa Ministira Muummee biyyaattii kan turan Mohaammad Abdullaahii Faarmaajoo pirizidaantii biyyaatti duraanii Hasaan Sheek Mohammuud bu’aa aja’ibsiisaa ta’een caaluun mo’aachuu isaanii BBC’n gabaaseera. Miseensoonni mana marii bakka bu’oota biyyaattii filannoo bakka eegumsi guddaan taasfamuufitti buufata Xiyaara Moqadiishootti gaggeessuun Mohaammad Abdullaahii Faarmaajoo lamummaa Somaaliyaa fi Amerikaa qaban preezdaantummaan filataaniiruru. Filannoo Pirezidantummaa kanaratti kaadhimamtoonni 20 kan hirmaatan yammuu ta’u, ...
Mirgaa isaanii waan gaafataniif qofaaf namoota qabee hidhee keessaa marsaa lammaaffaan hidhamtoota kuma jaha fi 988 giddu galaa leenjii loltummaa Xoollaay fi Yirgalamiitti hidhee daraaraa ture akka gadi dhiisee mootumaam Itoophiyaa beeksiseeraa. Hidhamtoota gadidhiifamaan keessa kumni shanii fi 605 giddu galaa leenjii loltummaa Xoollaay keessatti haala sukkaneessaan dararaama erga turanii booda kan gadidhiifaman akka ta’ee beekameera. Kan hafaan hidhamtoonni 1,385 ...
Mootummaan Itoophiyaa hanqina Faayinansii furuuf Gaaffii gurgurtaa boondii Birrii Biiliyoona 26.5 dhiyeessee mana marii bakka bu’oota ummataan mirkana’eera.
Labsii manni marii bakka bu’ootaa mirkaneessee kun mootummaan qamoolee adda addaa irra gurgurtaa boondii dhalaa qabuu akka raawwatuuf kan eeyyamu jedhameera. Mootummaan dhaabbilee maallaqaa liqeessaan adda adda irraa kaffaltii yeroo dheeraan kaffalamuun boondii birrii biiliyoona 26.5 akka gurguruuf beekameera. Gurgurtaan Boondii kun kaappitaalii baankii daldalaa Itoophiyaa guddisuuf akka karoorfamee qondaltoonni mootummaa beeksiisaaniiru. Ogeessoon diinagdee gamasantiin,gurgurtaan boondii kun hanqina bajeeta fi ...
Gamtaan Afriikaa Miseensummaa Mana murtii Yakkamtoota Addunyaa keessaa ba’uuf Murteesseera
Gamtaan Afriikaa Yaa’ii 28ffaa finfinneetti ta’een biyyooni miseensa gamtichaa ta’aan mana murtii yakkamtoota addunyaa keessa akka bahaan waamicha dhiyeesseef jira. Murtiin gmataan Afriikaa miseensummaa mana murtii yakkamtoota addunyaa keessa bahuuf murteessee kun dirqamsiisaa miti jedhameera. Biyyoonni sirna Dimokiraasiin sadarkaa tokkoo gara fulduraatti deeman kan akka Naayjeeriyaa fi Seenegaal murtii gamtaan Afriikaa miseensummaa mana murtii yakkamtoota addunyaa keessa bahuuf murteessee kana ...
Sumaliiyaatti ,hoggantoonni fi ajajatoonni looltoota Itoophiyaa daladala meeshaa waaraanaa fi malanmaltummaa adda adda irratti hirmaatanii akka argaman miidiyaaleen biyyaatti gabasaniiru
Sumaliiyaatti waggoota baay’eef Ajaaja lolotoota Itoophiyaa ta’uun kan tajaajila jiran Hayilee Gabree daladalaa seeraan alaa kana irratti hirmaachuun qabeenya kuufachaa akka jiran Gaazeexxaan Suunaa Taayimiis jedhamu suuraa hogganaa kana maxxansuun gabaaseera Lammiilee Sumaliiyaa biraatti maqaa Jeneraal Gabree jedhamuun ni beekamu jedhameera. Ajaajaan loltoota Itoophiyaa Hayilee Gabree mootummaa sumaliiyaa wajjiin waliigaluun maallaqaa maqaa nageenyaattiin arjomamu saamaa akka jiran gaazeexxaan kun namoota ...
Filannoo pireezdaantummaa Gaambiyaa ta’uun kan filataman Adamaa Baaroow, Imbaasii Gaambiyaa Seenegaaliitti argamutti waadaa akka galan beekkameera.
Pireezdaantiin Gaambiyaa haaraa filataman biyya ollaatti waadaa galuuf kan murteessan pireezdaantiin biyyattii duraanii filannoon mo’ataman Yaahiyyaa Jaameeh aangoo gadi hin dhiisuu waan jedhaniif. Biyyoonni hawaasa Diinageedee Afrikaa lixaa pirezdaantiin Gaambiiyaa Yaahiyaa Jaameeh karaa nagaatiin aangoo pirezdaantummaa pirezdaantii haaraa ummaataan filatameetti akka dabarsaniif guyyaan kennaniif xumurameera jedhaniiru. Biyyoonni Hawaasa diinagdee Afrikaa lixaa Yaahiyaa Jaameeh aangoo kara nagaatin kan gadi hin dhiisne ...
Sudaan Kibbaa walii galtee dhiyeenya Ijipti waliin irra geessee ilaalchistee ibsi Itoophiyaaf kennitu akka hin jirre beeksiiste.
Pirezdaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir Mayardiit Affeerraa pirezidaanti Abdul Fattaa Alsiisiitiin tibbaana Ijipti daawwataniiru. Pirezdaantiin Salvaakiir daawwaannaa tasaa kanaan pirezdaantii Ijpti Abduul Fattaa Al-Siisii waliin mari’ataniiru. Pirezdaantonni biyyoota lamaanii olaantummaa Ijipti itti fayyadama bishaan laga Naayeel irratti qabdu itti fufsiisuuf waliigaltee irra akka gahaniis himameera. Itoophiyaa fi Ijipti piroojektii hidhaa haaromsaa ilaalchisee yaada furmaataa tokko irra gahuu waan hin dandeenyeef ...
Lakkoosi dargaggoota gara Naannoo Sumaaleetiin gara biyyoota Arabaatti baqachuuf yaalaanii dabalaa akka dhufee Poolisiin naannoo Hararii beeksiseera.
Ji’oota jahan darban qofa dargaggoonni kuma tokkoo fi dhibbaa torbaa ol magaalaa Harari fi naannoo Sumaaleetiin gara biyyoota Arabaatti baqachuuf yaalan akka qabaman Komishiniin Pooliisii Naannoo Hararii beeksiiseera. Dargaggoonni kunniin gara maatii isaaniitti akka deebi’an taasfamuu Komishiniin Pooliisii Naannoo Hararii miidiyaalee biyyaa keessatti himeera. Bara darbe bifuma walfakkatuun dargaggoonni kuma sadi biyyaa baqachuuf wayita yaalan too’annoo jala olaniiru. Gochi gara ...
Daangaa Naannoo Oromiyaa fi sumaalee irratti walitti bu’iinsa uumameen lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan akka gahee himameera.
Gandoota daangaa naannoolee lamaanii irratti dhimmaa abbummaa lafaa fi dhimmoota biroo waliin wal-qabatee walitti bu’insi yeroo adda addaatti umaamuun lubbuun namaa darbaa akka jiru dhaabbanni mootummoota Gamtoomanii beeksiiseera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa irra walitti bu’insii jiraachuusaa malee walitti bu’insa kanaan namni meeqa akka ajjeeffame hin beeksifne. Walitti bu’insi aanaalee daangaa naannoolee lamanii gidduu jiru baay’ee kan nama yaaddessu akka ...
Ijipti lammiileen ishee sadii Itoophiyaa keessartti hidhamanii turan gadi dhiifamuu isaanii beeksiftee jirti.
Mormii Ummata Oromoo guutuu naannichaatti gaggeeffama ture wajjiin walqabatee lammiileen Ijipt sadi harka keessa qabu jechuun akka hidhaman ni yaadatama . Hidhamuu namoota sadeen ilaalchiisuun jaarsummaa ji’oota lamaatiin booda namonni sadeen gadi dhiifamuu akka dandan gaazeexxaan Ahiiraam jedhamu gabaaseera. Namooni sadeen magaala Finfinnee gadi dhiisaan gara kaayiiroo kan deeman yoo ta’u, yakkaa tokkoonu akka hin himatamne Ministeerri Dhimma Alaa Ijipti ...